Iqhwa lasolwandle i-Arctic lishaya irekhodi eliphansi ngoJanuwari | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Arctic iyancibilika. NgoJanuwari owedlule, iqhwa lawo lasolwandle labhalisa indawo entsha ngokuphelele, ngokusho kwezithombe zesathelayithi. Ngokulahleka kwamakhilomitha-skwele ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-13,400, ososayensi babikezela ukuthi lobu busika buzoba obunzima kakhulu e-Arctic futhi, ngaphezu kwakho konke, ngezakhamizi zakhona, njengebhere elisendaweni emhlophe, elidinga iqhwa ukuze likwazi ukusondela nokuzingela inyamazane yalo.
Kodwa-ke, izinga lokushisa lomhlaba wonke liyaqhubeka nokukhuphuka. Izindawo ezisempumalanga zisengozini enkulu, njengoba iqhwa libonisa imisebe yelanga, bese liyibuyisela emkhathini. Kepha kuye kufike isikhathi lapho iba buthakathaka incibilike, kudale ukuthi ulwandle lukhuphuke.
Lesi sithombe sikhombisa indawo lapho kwakuhlala khona iqhwa phakathi nenyanga kaJanuwari weminyaka yango-1981-2010, ephawulwe ngomugqa obomvu. Isithombe - Isikhungo Sikazwelonke Seqhwa Neqhwa
Kulesi sithombe esivela ku-National Snow and Ice Data Center ungabona indawo lapho iqhwa lalihlala khona phakathi nenyanga kaJanuwari esikhathini sika-1981-2010, elimakwe ngomugqa obomvu futhi elikulo kulo nyaka. Umehluko mkhulu. Kepha, isimo besingehlukeki. Ngokusho kukaNOAA, Bekuyinyanga yesithathu efudumele ngoJanuwari kuthatha njengesethenjwa isikhathi esifanayo (1981-2010).
Ukungahambi kahle kwezinga lokushisa emhlabeni nasolwandle ngoJanuwari 2017. Isithombe - NOAA
Izinga lokushisa lomhlaba wonke belimi ku-0,88ºC ngaphezu kwesilinganiso esingu-12ºC sekhulu leminyaka elidlule, okwesithathu okuphezulu ngoJanuwari esikhathini sika-1880-2017, futhi izinga lokushisa kobuso bolwandle kwakungu-0,65ºC we-15,8ºC wesilinganiso sekhulu lama-XNUMX, okwakuyindawo yesibili ephezulu kunayo yonke inkomba efanayo.
Amaphesenti wokulahleka kweqhwa lolwandle i-Arctic phakathi nezinyanga zika-Okthoba kuya kuFebhuwari kusukela ngo-1981. Isithombe - Isikhungo Sikazwelonke Seqhwa Neqhwa.
Ukuze wazi okwengeziwe, chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Iqhwa lasolwandle i-Arctic lihlasela phansi ngoJanuwari